Running on Karma (2003) | MM Movie Store
ဒီကားကို ကြှနျတျောငယျငယျတုနျးက ရှာလယျက ဗီဒီယိုရုံလေးမှာ သှားကွညျ့ခဲ့တာ…လူသနျဗလကွီးက ငှကျမှေးလေးလိုပေါ့ပါးစှာခုနျရငျး လူဆိုးတှကေို အားရပါးရ နှာခဲ့တဲ့သူ့ကိုအရမျးသဘောကခြဲ့တယျ….ဖွတျခနဲခုနျ..ဒေါသတကွီး လျောကာတှကေိုဝုနျးခနဲထိုးခြ..မကောငျးမှုကြူးလှနျတဲ့သူတှကေိုနှိမျနငျး.
အင်ျဂလိပျစာတနျးထိုးဆိုတော့နားမလညျ ပါးမလညျး အရမျးကောငျးတဲ့အကျရှငျကားလို့ပဲမှတျခကျြခခြဲ့တယျ…ကောငျးခနျးရောကျမှာတိပျခှကေ မှုနျနလေို့ ပိုကျဆံအသဈလေးနဲ့ပှတျပွီး ဖိုကျခနျးတှကြေျောသလိုဖွဈတဲ့ရုံပိုငျရှငျဦးလေးကွီးကိုပွနျရဈပေးပါလို့အသံဗွဲကွီးနဲ့အျောခဲ့တာ…
ခုမွနျမာစာတမျးထိုးလေးနဲ့ကွညျ့တော့ အကျရှငျကားဆိုတာထကျပိုတယျလို့ပွောလို့ရသလို ရသမွောကျ အကျရှငျကားလို့လညျးပွောရမယျထငျတယျ. ဒီလိုကောငျးလို့လညျး Best Picture,Best Actor,Best Screen Play စတဲ့ဆု(၃)ဆုတောငျရသှားပါတယျ…
Best Actor ဆုရသှားတာကတော့ခေါငျးဆောငျမငျးသား Andy Lau ဆိုတာတော့ပွောစရာလိုမယျမထငျဘူး….ကားဟောငျးလညျးဖွဈလို့ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတှမေပွောပွတော့ပါဘူး……
ဒီကားကို ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ရွာလယ်က ဗီဒီယိုရုံလေးမှာ သွားကြည့်ခဲ့တာ…လူသန်ဗလကြီးက ငှက်မွေးလေးလိုပေါ့ပါးစွာခုန်ရင်း လူဆိုးတွေကို အားရပါးရ နွှာခဲ့တဲ့သူ့ကိုအရမ်းသဘောကျခဲ့တယ်….ဖြတ်ခနဲခုန်..ဒေါသတကြီး လော်ကာတွေကိုဝုန်းခနဲထိုးချ..မကောင်းမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုနှိမ်နင်း.
အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးဆိုတော့နားမလည် ပါးမလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့အက်ရှင်ကားလို့ပဲမှတ်ချက်ချခဲ့တယ်…ကောင်းခန်းရောက်မှာတိပ်ခွေက မှုန်နေလို့ ပိုက်ဆံအသစ်လေးနဲ့ပွတ်ပြီး ဖိုက်ခန်းတွေကျော်သလိုဖြစ်တဲ့ရုံပိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးကိုပြန်ရစ်ပေးပါလို့အသံဗြဲကြီးနဲ့အော်ခဲ့တာ…
ခုမြန်မာစာတမ်းထိုးလေးနဲ့ကြည့်တော့ အက်ရှင်ကားဆိုတာထက်ပိုတယ်လို့ပြောလို့ရသလို ရသမြောက် အက်ရှင်ကားလို့လည်းပြောရမယ်ထင်တယ်. ဒီလိုကောင်းလို့လည်း Best Picture,Best Actor,Best Screen Play စတဲ့ဆု(၃)ဆုတောင်ရသွားပါတယ်…
Best Actor ဆုရသွားတာကတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသား Andy Lau ဆိုတာတော့ပြောစရာလိုမယ်မထင်ဘူး….ကားဟောင်းလည်းဖြစ်လို့ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေမပြောပြတော့ပါဘူး……
Adventure Of Tin Tin (2011)